Ngatitandare | Nhetembo - Detembai Titandare
Nhetembo – Detembai Titandare
Ane mari ndiye mukuru
Asi chii nhai
Chirwere chepa raini
Kusiri kufa ndekupi
Kugarira hari sembwa
Pfumvu yesadza paruzevha
Zviri mudzimba umu
Rwangu rudo rwakadzama
Yanaya rave jezi
Kumusha ndiko kumba
Tiri vana vamambo
Vamwe vaiti ibenzi
Kusina vamai hakuendwi
Chinangwa chako ndecheyi
Rega ndikurume nzeve
Nhamo rikawa zita remwana
Paivepo (Mukoma Tuku)
Muka mudiwa titandare
Iwe umire papi
Imwe nhamo kuzviparira
Kwaye ndiani apa
Mari ine chitema
Rudo runotemesa musoro
Kwamuka basa huyai
Makumi mairi nemashanu
Ndizvo zvinoita rudo
Ndizvo here zvataivavarira
Vhara gonhi (Covid-19)
Kunyangira iri mudanga
Zvanzi ndiri muroyi
Hwema handirase (michero yemusango)
Batai mapfumo (Ziva pekuisa X)
In love and money
Happy MOV Year
Rich mentality and behaviour
Morning drive in Provence
Celebrate with me, I’m British!
Mvura naya naya
Du du wareveyi
Mwedzi wagara (2)
Yawe nyama yekugocha
Tipei doro timwe
Chimbambaira chiri mupoto
Guyo riye randitambudza
Chikwama chababa chine madhora
Hoza here amaiwe-e
Varume, nhasi pano paita zinyaya, Rakaoma, dare rafukunura zvihombe! Mudunhu raSabhuku Mazvimbakupa, Mbudziyadhura akaita chisionekwi! Potoda kuisa misoro pamwe chete. Tisati tatanga kana…
Posted On 19 Jun 21 Jun
Chitema chakati mbee
Ndokungura vatakakotsa riya gore rendongwe, Vakasotsakatika, nyakutumbura VaNyamutekede, Pada vakarovera zamu pasi kuti ndife ndiri rombe! Ndiko kusisadzokereki, kwatakabva kwave kure. Kuyaruka kwacho…
Posted On 15 Feb 3 Jun
Hombi, hombiro, hombi chairo (Hona urombo) Vacharigaduri vakaita nharo ndakavakangambura nechigero (Hona urombo) Zvandavakangambura ndakaripa mombe nembudzi mbiri (Hona urombo) Mbudzi mbiri ndakabaya…
Posted On 31 Dec 30 Dec
Zvataurwa naMagurete ndizvo! Kutanga, kupedzisa nekupendera, Muridzi vemurume ndimaiguru! Muridzi vemuchato, muridzi wemba, Vane vana vanozikanwa kusvondo, Nyangwe vakadini, kana kushereketa, Chero vakati…
Posted On 30 Dec
Ganda kutsvukirira, Kubvumwa nemvura, Matama kuzvimbirira, Sendine manjoko mukanwa, Mhanza kutoikira, Kupenya senyeredzi, Naidzo mvere chena, Makushe bedzi zvavo, Mhare, mujenandebvu, Ruzivo rwawandisa,…
Posted On 23 Dec 30 Dec
Chine manenji hachifambisi
Kutaurirwa hunyimwa vanhuwe-e, aaa! Zvakatanga sekuseka tiri kwaChecheche, Sechivhundu, takavarairwa kuti vavava, Mumubvuri vemusharu takagara tatata, Takazviona zvedu vachangoti gogogo, Nemeso machena, akati…
Posted On 28 Nov 10 Jun
Ticha ndibatei maoko Ndaita namba mbiri Ndaita namba 1 nenamba 2!
Posted On 17 Nov
Uchiri pamhandara, haiva! Kubika machikichori kupera, Kubura hwaingove huchi, Kuita kudadamira kutsvoda, Hoyo muviri wonyunguduka! Zvino chi-i chatora nzvimbo? Chapinda rukonye, rwadzika midzi,…
Posted On 16 Nov 17 Nov
Chada mwoyo hachikoni, Kana kugara handichagoni, Chionaka zvandafunga wena, Iwe neni kubva tovadzana, Ini zvangu ndinokuda chose, Ndodada kune vamwe vose, Kubva nhasi…
Posted On 23 Oct 30 Dec
Handidi mari yako
Handidi mari yako, Yekutanga ndaudzwa magaramwoyo, Hanzi he-e he-e, zvakazodai zvikazodini, Kusvika ropa rangu rogwamba. Gara nemari yako, Asi tanga wabhadhara imba, Mutero…
Posted On 19 Oct 23 Oct
Cheryl on Sadza
Alpha simbaneuta on Mukombe vamadzisahwira
Alpha simbaneuta on Kugarira hari sembwa
daisleymavudzi on Kugarira hari sembwa
Tendai mhike on Kugarira hari sembwa
Designed by CodetoRank.com. © 2022 Nhetembo - Detembai Titandare. All Rights Reserved.